Sizokwenza kanjani ukubuyisela emuva okulula ku-2019?
Ukusebenzisa injini yokusesha kungaba nzima futhi kusabise, ikakhulukazi ochwepheshe abasha ngaphandle kokuhlangenwe nakho okuthile. Le sphere ihlanganisa amasu amaningi wokuthuthukisa, izibalo, amathuluzi, izinhlelo kanye nokubuyekezwa kwe-algorithm. Ngaphezu kwalokho, ukumaketha kwe-digital akuyona imakethe emakethe eqinile. Amanveliveli amaningi futhi avela kulesi sigaba nsuku zonke, futhi kunzima ngisho nangabezifundiswa ukugcina lonke ulwazi olungenayo. Naphezu kwazo zonke lezi zinzima, kunendlela elula yokucabanga nge-SEO. Le nqubo iqukethe izingxenye ezintathu ezixhunyanisiwe nezixhunyanisiwe ezenza ukwandisa ithrafikhi - trade-in my dell laptop. Lezi zici zifaka phakathi - okuqukethwe, izixhumanisi ezingenayo, kanye nemithombo yezokuxhumana. Ukusebenzisa lezi zindlela zokusebenzisa ngendlela efanele, uzothola kalula izimpendulo zangemva kuka-2019. Udinga ukukhokha kakhulu kuzo zonke lezi zinyathelo ezintathu zokuthuthukisa njengoba zidingekile noma yikuphi umkhankaso we-SEO wanamuhla wokuphumelela. Uma ulahlekelwa okungenani isiteji esisodwa sokusebenza, uzophela ekhasini le-10 le-Google SERP ngokuhamba kwe-traffic ephansi kakhulu.
Ngaphambi kokuba siqale ukuxoxa ngalezi zakhi ezintathu eziyinhloko, kunezinto ezimbalwa okufanele ziqonde mayelana nokuthi zisebenza kanjani eziyinkimbinkimbi.
Izingxenye ze-SEO zokuxhumana
Kubalulekile ukuba nomculo, njengoba kunzima kakhulu ukudala isinyathelo sokusebenza ngokuphumelelayo. Ukuze wenze ikhwalithi yekhwalithi yekhwalithi neyinkimbinkimbi, awukwazi ukushiya enye yalezi zingxenye njengendlela yokunqoba yokudinga idinga ukukhuthaza kulezi zindawo ezintathu. Ngaphezu kwalokho, ngayinye yalezi zingxenye eziyinhloko ze-SEO iqinisa abanye. Uma ingxenye eyodwa, e. g. , okuqukethwe kukhishwe ngendlela efanele, ezinye izakhi ezimbili (emuva kwe-backlink kanye nemidiya yezenhlalo) cishe zizoletha inzuzo kumthombo wakho wewebhu. Ukwenza injini yokusesha ngendlela efanele kuwu-ton of umsebenzi olandelayo futhi ocingayo. Awukwazi ukwenza noma yiziphi izinqamuleli emkhankasweni wakho wokwenza ngcono njengoba kubangela umonakalo onobungozi kwiwebhusayithi yakho SEO futhi uchithe imizamo yakho kwezinye izindawo zokuthuthukisa. Ngenhlanhla, ungabhekisela ochwepheshe ku-SEO. Bobabili ama-freelancers nabangaphakathi kwe-SEO ochwepheshe bangakusiza ukuba uhlangabezane nemigomo yebhizinisi lakho.
Ngakho-ke, ake sixoxisane nalezi zingxenye ezintathu ze-SEO ezibaluleke kakhulu ekutholeni kalula ukuthola ama-backlink ngo-2019.
Okuqukethwe kuyisici sokuqala senoma yiluphi umkhankaso wokuthuthukisa njengoba okuqukethwe kusengenkosi. Ithinta ngokuqondile isipiliyoni somsebenzisi ngesayithi lakho futhi ikhombisa ukuqeqeshwa kwakho embonini. Wonke amawebhusayithi anokuqukethwe okungaziwa yizinjini kuphela, lokhu okuqukethwe kuthiwa yi-meta okuqukethwe. Yingakho udinga ukuqinisekisa ukuthi awukona nje kuphela ukudala okuqukethwe kwekhwalithi nokucwaninga kodwa futhi nokwandisa imethadatha yakho njenge-URL, izihloko, izincazelo, izihloko kanye namarobhothi. txt.
Nakuba ungase ube newebhusayithi ehlelwe kahle futhi enzelwe kahle, awunakwenziwa ngokusebenza kwenjini yokusesha. I-blog ingaba nomnikelo omuhle kakhulu kuwebhusayithi yakho ye-SEO nokwenza ngcono. Ngineluleka ngokuqinile ukuthi unganaki ukubhuloga njengoba okuqukethwe kwekhwalithi kudonsela abasebenzisi kusuka kusesho futhi kwenza ukuba zijule kakhulu emakhasini akho esayithi.
Uma ungathanda ukuba ibhuloga enhle futhi ukhange amakhasimende amasha emakhasini akho, kufanele ulandele izinyathelo ezilandelayo:
Yakha njalo into entsha
Udinga ukushicilela izihloko ezintsha kumakhasi ebhulogi yakho ukuze ubonise izinjini zokuthi umthombo wakho wewebhu usebenza futhi uphila. Ngokuvamile ibhulogi yakho ibuyekeziwe, impendulo engcono ozoyithola kusuka ku-Google. Yingakho udinga ukugcina ibhulogi yakho ihlanzekile.
Nikeza abasebenzisi ngemininingwane ewusizo
Impumelelo yakho yebhulogi ngokuqondile incike kwinombolo yabafundi bakho bokuqukethwe. Yingakho udinga ukukhokha ngokukhethekile izinga lokuqukethwe oshicilela kubhulogi yakho. Abasebenzisi abafuni ukuchitha isikhathi sabo befunda okuqukethwe okungavamile, okungafaneleki futhi okuphansi. Udinga ukuzibandakanya ngezinto eziyingqayizivele kanye nezombusazwe. Okuqukethwe kwakho kufanele kube kuhle ukwenza abafundi bahlanganyele ngomunye nomunye.
Amaqhinga wokukwakha isixhumanisi afaka ukubhulolwa kwezivakashi, ukusabalalisa ukushicilelwa, ukuphawula, nezinye izici zokuxhumanisa izixhumanisi.
Ukwakhiwa kwesixhumanisi kubalulekile ekuthuthukiseni brand yakho kanye nokukhushulwa njengoba izinjini zokusesha zibona igunya lakho lesayithi kanye nedumela elisuselwe kuhlobo luni lamawebhusayithi axhumanisa kuwe. Imithombo yewebhu yekhwalithi ephakeme kakhulu ikuxhumanisa nawe, ephakeme uzobeka ohlwini ekhasini lemiphumela yokusesha. Ukuthola ijusi lokuxhumanisa ngekhwalithi kusuka kumasayithi ahloniphekile, udinga ukuba yiwebhusayithi enhle yekhwalithi enezinto eziyingqayizivele nezifanelekile nedumela elihle phakathi kwabasebenzisi.
Ukuthola imithombo ye-intanethi egunyaziwe ngaphakathi kwe-niche yakho, udinga ukuqhuba ucwaningo lwemakethe futhi uthole amabhulogi namawebhusayithi axhumene neyakho futhi avumele ukuthunyelwa kwabavakashi. Khona-ke udinga ukuxhumana nalaba abanikazi bewebhusayithi bese ubabuza ngamathuba okuxhumanisa kuwe. Qinisekisa ukwakha izixhumanisi ezilandelayo uma lolu hlobo lwama-backlink kuphela oluletha isiphuzo esibalulekile sokuxhumanisa kusayithi lakho. Awekho amasayithi angaphumelela ekusebenziseni injini yokusesha ngaphandle kokuthi amanye amasayithi axhumane nawo.
Ake sixoxe ukuthi yiziphi izindlela ezitholakalayo zokuthola izixhumanisi ezingemuva kwisayithi lakho:
) Inqubo yokuthi ungathola kanjani ama-backlink ngokusebenzisa ukubhulolwa kwabavakashi, ngike ngachaza kulesi sihloko. Kuyindlela engcono kakhulu yokwakha izixhumanisi njengoba kungavamile ukubhekwa ngezinjini zokusesha njengogaxekile. Ngaphezu kwalokho, kuyithuba elihle lokuxhumana nezilaleli zakho ezihlosiwe futhi ukhange amakhasimende amasha angakhona kumkhiqizo wakho.
Ukudala ukukhishwa kwemishini kuyindlela elula yokuthuthukisa ukuqwashisa nge-brand yakho futhi utshele abantu mayelana nezintshumayelo zakho kanye nezinguquko. Konke okudingayo ukuthuthukisa isiqeshana esilotshiwe kahle kwento evelele enkampanini yakho bese uyithumela ekhamishini yokusabalalisa i-press release.
Yakha okuqukethwe okubandakanya
Indlela ephilayo yokuthola ijusi yokuxhumanisa kwekhwalithi ukudala okuqukethwe okubalulekile abasebenzisi abazokwabelana ngakho. Isihluthulelo sokuphumelela ukushicilela izinto ezisetshenzisiwe ezenzelwe ucwaningo ezilandelayo nge-infographics njalo.
Thola ohlwini lwezinkampani zendawo noma izinhlangano ezigxile ezisebenzayo
Kunengqondo ukwengeza umthombo wakho webhovisi yebhizinisi njengoba kunabantu abaningi abaseshayo izinhlangano ezidingekayo ngalezi zincwadi. Izixhumanisi kusuka kunoma imuphi umthombo ohloniphekile uzokusiza ukuthuthukisa isikhundla sesayithi lakho, ngakho ungaphuthelwa ithuba lakho. Kunamasevisi amaningi kuwebhu enikeza abanikazi bewebhu ngamathuba wokwakha izixhumanisi ezivela ezinkampanini ezinkulu zendawo.
Thola i-backlinks yakho yokuncintisana
Ungazuza kumncintiswaneni wakho we-market niche abavele bafaka imizamo yokuhlanganisa. Okokuqala, udinga ukuhlaziya ukuncintisana bese uthola abadlali bakho be-TOP5 niche. Bese uhlonza ukuthi izixhumanisi zakho zinamakhophi kanye nemithombo evela kuzo lezi zixhumanisi. Thola abancintisana bakho baxhumane nabaxhasi bese ubabuza ngamathuba wokuxhumanisa ibhizinisi lakho.
3. Imithombo yezokuxhumana
Ukuze usebenze emithonjeni yezokuxhumana, ithikithi yakho isesikhundleni esiphakeme ku-SERP. Imithombo yezenhlalakahle ezinsukwini zethu iyingxenye ebalulekile yokusekela injini yokusesha. Ngeziteshi zomphakathi wezokuxhumana, ungaxhumana namakhasimende akho bese usungula ubuhlobo obunobungane. Ukuthola okuningi okuthandwayo namasheya kunganciphisa igunya lekhasi, ngakho-ke izikhundla zalo, okuholela ekutheni kube nokuningi kwezenhlalo zomphakathi kuwo.
Ngenkathi uqhuba umkhankaso wakho wokumaketha wezokuxhumana, hlala ukhumbule amathiphu alandelayo:
Uma usungula umkhiqizo wakho kwelinye lamapulatifomu oxhumana nabantu abathanda I-Google +, Facebook noma Twitter, kudingeka usebenze ngaphansi kwalo nsuku zonke. Akukwanele ukushicilela okuthunyelwe kanye ngesonto njengoba abalandeli bakho bezokhathala ngokushesha bese behluleka ukukulandela. Ngakho-ke, uma ufuna ukuphumelela enkundleni yomphakathi, udinga ukuhlinzeka abalandeli bakho ngezikhala zansuku zonke ngezihloko ezithandekayo, ukuhlola, nemincintiswano. Udinga ukusebenzisa zonke izindlela zokuxhumana nezethameli zakho futhi uziqiniseke kumkhiqizo wakho.
Thola amanothi omphakathi afanele embonini yakho. Yiqiniso, KUFANELE ukudala i-akhawunti yakho yebhizinisi ku-Facebook, Instagram, naku-Twitter, kepha lezi zindawo eziyingxenye yechungechunge lwezingosi zomphakathi ezitholakalayo kuwe. Kunengqondo ukubuka ezinye izingosi zomphakathi ezisebenzela ama-client of targeted.
Izingxenye ezintathu engizichazile kulesi sihloko (okuqukethwe, ukuxhumanisa isakhiwo, nokugqugquzelwa kwezokuxhumana) kubalulekile ekukhuthazeni ibhizinisi ngo-2019. Ukuphumelela kwe-SEO kunokwenzeka, kodwa ngaphandle kokukodwa kwalezi zakhi ezisemqoka ezikhona futhi ezisebenzisana kahle. Namuhla, kunzima ukwenza izinjini zokusesha futhi kuphakamisa isikhundla sakho ngamasu ambalwa. Yingakho udinga ukutshala isikhathi sakho nemizamo ekudaleni okuhle komkhankaso wokwenza ngcono. Ngenxa yalokho, uzothola ukubuyiselwa okuphezulu kokutshalwa kwezimali.
Udinga ukuba nenqubo eqondile emkhankasweni wakho wokwenza ngcono nokwakha uhlelo oludinga ukusekelwa ekwakheni izixhumanisi zangaphandle kusuka emithonjeni enegunya emkhakheni wakho, ekwakheni okuqukethwe kwekhwalithi kanye nokucwaninga okulungiselelwe ngevolumu efanele nephezulu amagama angukhiye, futhi ekugcineni ukudala ukuqina komphakathi okuqinile njengoba inani elikhulu lamakhasimende akho angasebenzisa amanethiwekhi omphakathi nsuku zonke.
Uma nje uqinisekisa ukuthi ukuhlelwa kwakho kokusebenza (ukuklanywa kwewebhu, ukuxhumeka kokuqukethwe, ukumaketha kokuqukethwe, ukucwaninga ngegama elingukhiye, ukulungiswa kwemethadatha) kuhamba kahle; unomkhankaso wokwakha umxhumanisi ophumelelayo futhi onqobayo futhi ukhuthaze umkhiqizo wakho kumapulatifomu ezokuxhumana nabantu, uzophumelela ebhizinisini le-intanethi.